Mitana ny laharana fahatelo eran-tany amin’ny lafiny « hara »
Anisan’ny aritra nametrahana ny komitim-paritra handrindra sy hitantana ny tontolo amorontsiraka sy an- dranomasina ny any Toliara. Inona marina ary ny fandaharan’asan’ity komity ity mba hoentina handrindra sy hitantana ny morontsiraka? Indro ny rasaka fohy nifanaovanay tamin-dRamanandraiarivony Thierry, sekretera teknikan’ny kimotom-paritra "GIZC" Atsimo Andrefana no sady mpandrindra rezionalin’ny "SAGE" Toliara.
Nanouh : Oviana no nitsanganan’ity komitim-paritra GIZC tao Toliara ity ary inona no efa zava-bitany ?
Ramanandraiarivony Thierry : Ny 01 martsa 2011 no nahazo ny fankatoavana ara-panjakana ny komitim-paritra GIZC tao Toliara. Vao nahazo io fankatoavana ara-panjakana io izahay dia nanamboatra ny drafitr’asa mandritra ny telo taona hanaovana ny asa, izay hanomboka ny taona 2012 ka hatramin’ny 2014. Marihikko fan a dia any amin’ny taona 2012 aza vao tena hanomboka ny asa izahay dia efa misy ihany ny asa fanomanana izany. Anisan’ny asa efa
natao tamin’izany ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny vaovao avy any amin’ny faritra sy ny mikasika izay atao hoe fitantanana mirindra sy maharitra ny tontolo amorontsiraka sy an-dranomasina izany. Efa natsangana ihany koa ny komitim-paritra GIZC Atsimo Andrefana sy ny birao hitantana azy io. Amin’ny 2012 fia hiroso amin’ny fanatanterahana ny drafitr’asa efa novolavolaina. Distrika efatra izay manana moron-dranomasina amin’ireo distrika sivy misy ao an-toerana no hanatanterahana ny asa dia Toliara I sy II, Morombe ary Ampanihy.
Nanouh : Inona no mampiavaka an’I Toliara raha ny morontsiraka no jerena ?
Ramanandraiarivony Thierry : Azo lazaina fa manan-karena ny torapasik’i Toliara ary azo trandrahana tsara hanintona ireo mpizaha tany izany. Ambonin’izany, dia mitana ny laharana fahatelo manerana izao tontolo izao ny Toliara raha ny lafiny “récif” na hara no jerena. Izay no maha Toliara an’i Toliara. Manana ny harena anaty ranomasina izay mampalaza azy ihany koa i Toliara toy ny makamba, ny orita sy ireo karazan-trondro marobe. Maloto anefa ny morontsiraka amin’ny akapobeny ka anisan’ny asan’ny GIZC Atsimo Andrefana ny mandrindra sy mandio izany morontsiraka izany. Mila vola anefa izany la ezahina ny hifandray amin’ny mpamatsy vola. Mandoa vola aminay ihany koa ireo mpandraharaha mampiasa ny tora-pasika.